औँठी बेचेर गीत रेकर्ड गर्ने ‘लाइभ क्वीन’
लोक–पप गायिक योजना पूरी युवा पुस्ता माझ निकै चर्चित छिन् । १ दशकदेखि गायन र उद्घोषणमा सक्रिय उनले ४ दर्जनभन्दा बढी गीय गाइसकेकी छन् । मोरङ उर्लाबारीमा जन्मिएकी उनका मनै त हो,पहाडकी छोरी,घार–धुर्र मदानी, ऐ शिवजी,भगायो ड्राइभरले गीत बजारले रुचाईएका गीतमा पर्दछन् । पढाइमा पनि योजनाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेकी छन् । नेपालमा पहिलो पटक फेसबुक लाइभ कार्यव्रmम सुरु गरेकी पुरीलाई धेरैले ‘लाइभ क्वीन’ भनेर पनि चिन्छन । बहुमुखी प्रतिभाकी धनी पुरीको गायन यात्रा,संघर्ष र सफलतामाथि केन्द्रित भएर अमरवाणी अनलाइनले गरेको कुराकानीः
तपाईलाई गायन क्षेत्रमा लाग्ने चाहना कसरी पलायो ?
म सानैदेखि रेडियो सुन्ने गर्थे । रेडियोमा बज्ने गीत र आवाजले मलाई एकदमै जिज्ञासु बनाउथ्यो । रेडियोबाट कसरी आवाज आउछ भन्ने लाग्थ्यो । त्यसभित्र मान्छे पो हुन्छ न कि भन्ने लाग्थ्यो । यतिसम्म कि म ९÷१० वर्षको हुँदा मैले रेडियो नै फुटाए हेरेको थिए । त्यसभित्र त चुम्बक र साना यन्त्र पो रहेछन् । रेडियोकै आवाज सुनेर ममा गायिका बन्ने सोच आएको हो । बुवा पनि सामान्य गायक हुनुहुन्थ्यो, जनवादी गीतहरु गाउनु हुन्थ्यो र सराङ्गी पनि बजाउनु हुन्थ्यो । त्यसले पनि प्रभाव पारेको होला । म विद्यालयमा सानै कक्षामा गीत गाएर पुरस्कार जित्थे ।
यो क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँको इच्छाप्रति घरपरिवारको कस्तो सहयोग रह्यो ?
मेरो बुबा/आमा त मेरो इच्छाप्रति एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । तर, अंकलहरुले चाँहि छोरी गीतसंगीत क्षेत्रमा नलागोस, यसमा दुःख छ, भन्नुहुन्थ्यो र मलाई उहाँहरुले नर्स बनाउने इच्छा राख्नुभएको थियो । नर्सिङको प्रवेश परीक्षा दिन विभिन्न क्याम्पसमा लानुपनि भएको थियो । म इन्ट्रान्समा जानी–जानी फेल हुन्थे । किन कि मलाई नर्स पेशा भन्दा गायिका बन्ने प्यास थियो । त्यही हुटहुटी पूरा गर्न यो क्षेत्रमा लागँे । अहिले त अंकलहरु पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ । गायन क्षेत्रबाट जेजति आर्जन गरेको छु स्रोताहरुको माया पाएको छु त्यसमा सबै खुसी छन् । र ,मिहेनत र निरन्तर लागेमा जुनसुकै पेशामा पनि सफलता हात पार्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । पहिलो गीत रेकर्डिङको अनुभव कस्तो रह्यो ? पहिलो गीत मैले झापा दमकमै रेकर्ड गरेँ । गीत रेकर्ड गर्दा अलिअलि नर्भस त भए तर खासै गाह्रो भएन् । समस्या चाहिँ पैसाको भयो । मैले पैसा नभएर आमाले उपहार दिनु भएको औंठी बेचेर गीत रेकर्ड गरेकी थिए । भनौ मेरो लागि त्यो औैठी भन्दा मेरो गीत रेकर्ड गर्ने हुटहुटी बढी थियो । त्यो गीत थियो, सम्झन्छु तिमीलाई..... ।
गायन क्षेत्रलाई अगाडि वढाउन काठमाडौं छिर्नुभएको हो ?
हो । गायन क्षेत्रमै लाग्ने उद्देश्यले काठमाडौं आए । घरपरिवारमा बुवा÷आमा सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । अंकलहरुले म गायनमा लागेको त्यति रुचाउनु भएको थिएन् । तैपनि दुःख गरेर आफ्नो यात्रामा म निरन्तर लागि रहे । तारा लिम्बु दिदीसँग मिलेर २०६५ साल तिर एल्बम निकाले । त्यो एल्बम निकाल्न पनि पैसाको निकै खाँचो भयो । बुवाले साउदी अरबमा पसिना बगाएर कमाएको ६५ हजार रुपैया एल्बम निकाल्न खर्च भयो । कति मान्छे विदेशको कमाईले घरजग्गा जोड्छन् तर, मैले एल्बम निकाल्न पैसा खर्चिए । त्यो पैसाले नपुगेर मैले आफ्नो सुनको सिक्री बैंकमा धितो राख्नु परेको थियो । यस्तो दुःख गरेर निकालेको एल्बम ‘न्यू वे’ थियो ।
पहिलो एल्बम निकाल्दा के–कस्ता समस्या झेल्नु भयो ?
निश्चय पनि केही समस्याहरु आए, मध्यम वर्गीय परिवारको छोरी भएकाले धेरै ठूलो नभए पनि साना तिना आर्थिक समस्याहरु आइ परे, सोचेको काम सही ढंगले र सही समयमा नहुनाले केही चिन्ता चाहिँ लाग्दथ्यो तर म हतास भइन् । हाम्रो मानसिकतामा ढिलाई, अल्छीपनले गहिरो जरो गाडेको छ । त्यसले गर्दा पनि काम हुन समय लाग्यो, पर्खनु प¥यो तर जे होस् पर्खाइको फल मिठो हुन्छ भने झैँ एल्बम बजारमा आउँदा निकै नै खुसी लाग्यो । म स्कुलमै हुँदाखेरी नै डाक्टर योगी विकासा नन्दको प्रवचन सुन्थे, उहाँको सकारात्मक साहित्यहरु पढ्थे, त्यसले पनि मेरो सहनशीलतालाई बढाएको थियो । म आफैँले आफैँलाई सम्झाउँथे । ‘योजना त यहाँ केही गरेर देखाउन आएकी होस्’ तैँले नै हिम्मत हारे के हुन्छ ? भन्ने विचार मनमा आउँथ्यो ।
संगीतबाट कसरी उद्घोषणमा फड्को मार्नुभयो ?
यो तारा लिम्बु दिदीको साथले गर्दा हो । एल्बम निकाली सकेपछि विभिन्न एफएम रेडियोमा अन्तरवार्ता दिन जानु पर्दथ्यो । सुरुमा डर लाग्थ्यो र एफएमका प्रस्तोताहरु कसरी यस्तो कार्य गर्न सक्छन् होला जस्तो लाग्थ्यो पछि घुलमिल हुँदै जाँदा ए म पनि के कम छु र म पनि उद्घोषण गर्न सक्छु भन्ने साहस मनमा पलाउँथ्यो । कुनै काम सुरुमै गाह्रो लाग्यो भन्दैमा छोड्नु हुँदैन । सुरुमा त सबै काम गाह्रो नै हुन्छ तर विस्तारै त्यसमा लाग्दै गएपछि, गाह्रोपन सहँदै गए पछि त्यो सजिलो बन्छ र त्यसपछि त एकदमै सजिलो बायाँ हातको खेल भन्छन् नि त्यस्तै हुन्छ । हामी जुन विषय अफ्ठ्यारो छ त्यसलाई बेवास्ता गर्छौ या किताबलाई कुनातिर थन्काउँछौ वास्तवमा त्यस्तो गर्नु हुँदैन बरु त्यसलाई गाह्रो हुँदाहुँदै पनि पठन जारी राख्नुपर्छ विस्तारै त्यही विषय सबभन्दा सजिलो लाग्छ । यो सल्लाह चाँही मेरो विद्यार्थी दर्शक श्रोतालाई है त । त्यसपछि संगीतलाई बढाउनकै लागि मैले आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्दथ्यो । म कसैमा भर नपरी आफैँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्थेँ । त्यसले गर्दा एफएममा उद्घोषण थालेँ । काम गाह्रो थियो बिहान ५ बजेदेखि बेलुका पाँच बजेसम्म काममा खटिइन्थ्यो । २ वर्षसम्म साहै्र मिहेनत गरे त्यसपछि अर्को एफएममा पार्टटाइम गरेर संगीत सिक्ने र संगीत साधना गर्दथे । त्यसै बीचमा २०७२ सालमा भूकम्प आयो, सबै क्षेत्रमा मन्दी छायो । समयमा तलब नपाइने अवस्था थियो । त्यसले निश्चय नै केही गाह्रो त हुन्थ्यो नै तर केही गर्ने प्रतिज्ञा भएपछि त्यो पनि सजिलै पार गर्न सकिन्छ या सकिँदो रहेछ यो म मेरो अनुभवबाट भन्दै छु ।
त्यसपछि मैले अनलाइन पत्रिकामा काम गरे । ओएस नेपाल युट्युब च्यानलमा पनि काम सुरु गरे । ओएस नेपाल नेपालकै सबभन्दा धेरै दर्शक (भ्यूअर्स) भएको यूट्युब च्यानल हो । नेपालमा पहिलो पटक नै फेसबुक लाइभ कार्यव्रmम मैले सुरु गरे त्यसैले धेरै जनाले मलाई ‘लाइभ क्वीन’ भनेर पनि चिन्नुहुन्छ ।
कलाकारिता क्षेत्रमा महिला कलाकारहरुमाथि यौन हिंसाका हुने कुरा बेलावखत चर्चामा आउने गरेको छ ? तपाइँले पनि यस्ता समस्याहरु भोग्नु प¥यो कि ?
जहाँसम्म मैले त्यस्ता समस्या भोग्नु प¥यो कि भन्ने कुरा छ, त्यसमा के छ भने त्यस्ता समस्या सृजना गर्ने तत्वहरु आउन नखोजेका होइन तर तिनीहरुलाई मैले समयमै तिनीहरुको निहीत स्वार्थ बुझ्न सकेकाले त्यस्तो समस्या आइलागेनन् । तर, केही गायिका साथीहरु यस्तो समस्या परेको कुरा गर्नुहुन्छ । यसमा म आफ्नो गाँठो राम्रोसँग बाँध्नु, चोरलाई दोष नलाउनु भन्न चाहन्छु । त्यस्तो तत्व त जहाँ पनि हुन्छन् तिनीहरुलाई समयमै चिन्नुपर्छ, बहकिनु हुँदै, जालमा पर्ने छिट्टै रातारात सेलिब्रेटी बन्ने चाहना नराख्नु नै बेस र अर्को कुरा शिक्षित भएको खण्डमा त्यस्ता समस्या पैदा गर्नेहरु टाढै रहन्छन् । म त भन्छु जो सँग सुन्दरता मात्रै छ तिनीहरुलाई त्यस्ता समस्या आउँदछन् तर ब्यूटी विद् ब्रेन छ भने त्यस्तो आँट गर्दैनन् । साथै पुरुष वर्गको पनि महिला प्रतिको सोचाइ र धारणामा आमूल परिवर्तन आउन जरुरी छ । क्षणिक स्वार्थका लागि ठूलो जोखिम उठाउदा उहाँहरुलाई पनि घातक छ । जसरी अमेरिकामा यौनिक हिंसाका घटना बाहिर आउँदै छन् र दोषिमाथि कार्यवाही हुँदैछ । अब नेपालमा पनि बिस्तारै आवाजहरु उठ्दैछन् र चाँडै त्यस्ता क्षणिक स्वार्थ पुरा गर्न चाहनेहरु कठघरामा उभिने छन् । यो कुरा सबैले गहिरिएर हृदयदेखि सोच्नु जरुरी छ ।
गीत/संगीत बाहेक तपाईको रूची केमा छ ?
मलाई पढ्न असाध्य मन पर्छ । व्यस्तताका बावजुद पनि समय निकालेर म सकारात्मक सोचयुक्त पुस्तक पढ्छु । म विशेष गरेर डा. योगी विकासानन्द, ओशोका किताबहरु, नारीवादी कितावहरु, तस्लिमा नसरिनका किताबहरु र सफलतासँग सम्बन्धित किताब पढ्छु, नभए यूट्युबमा यस्तै कार्यव्रmमहरु हेर्छु । हाम्रो जीवनमा सोच निर्धारण गर्न किताबले ठूलो भूमिका खेल्छन् । एउटा भनाइ नै छ, तिमी पाँच ओटा किताब जस्तो पढ्छौ त्यस्तै बन्छौ ।
तपाइँ आफूलाई बहिर्मूखी या अन्तर्मूखी के ठान्नु हुन्छ ?
म बच्चामा बहिर्मूखी नै थिए तर यूवावस्थामा अन्तर्मूखी तर आजभोलि आवश्यकता अनुसार बहिर्मूखी र अन्तर्मूखी बन्छु । आफ्नो विषय र क्षेत्र सम्बन्धित विषय वस्तु भए आफ्नो विचार निडरता पूर्वक विना हिचकिचाहट राख्न सक्छु ।
नयाँ बर्षको योजना के छ ?
योजना त बनाउनै प¥यो । आउने वर्षमा एकल एल्बम “योजना” निकाल्दै छु सायद दसैँ सम्ममा तयार हुन्छ होला । त्यसैगरी कन्सर्टका लागि विदेश जाने योजना पनि छ । त्यसैगरी मलाई ध्यान योगामा पनि गहिरो रूची छ, त्यसलाई नियमित गर्नेछु ।
संगीत क्षेत्रमा आउन चाहने तथा आमस्रोताहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
सम्पूर्ण नेपालीहरुमा नयाँ वर्ष २०७५ को मंगलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु । अरुले शुभकामना न दिने हो । सफलताको लागि मिहिनेत गर्ने, पसिना बगाउने काम त तपाईहरुकै हो, त्यसैले कामना भन्दा काममा विश्वास गर्नुहोला, ज्ञानको दायरा र क्षेत्रलाई बढाउनुस् भन्न चाहन्छु र गीतसंगीत क्षेत्रमा आउन चाहनेलाई गहिरो दृढ इच्छा शक्ति ल्याएर मात्र आउनुस् । म गीत संगितमा सफल भएरै छाड्छु भन्ने आत्मविश्वास राख्नुस् संघर्ष गर्न तयार रहनुस् । तयारी गर्नुस् । ज्ञान बटुल्न कन्जुस्याई नगर्नुस् । एउटा गायक गायिकाले गीत गाउँदा जति सजिलो देखिन्छ वास्तविकता त्यो भन्दा गाह्रो हुन्छ । गाह्रोपनलाई झेल्ने शक्ति जम्मा गरेर आउनुस् तपाईको गायक गायिका बन्ने सपना अवश्य पुरा हुनेछ । तपाईँहरुलाई हार्दिक शुभकामना ।
प्रकाशित २0 चैत्र २0७४ , मङ्गलबार | 2018-04-03 01:29:06